ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့တုန်းက မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်မှုဟာ အမေရိကန်နဲ့ သူ့ရဲ့ အာရှမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကို အငိုက်မိ သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဒုံးကျည်မပစ်လွှတ်ခင် ရက်ပိုင်းက မြောက်ကိုရီးယားက သူတို့မှာရှိတဲ့ ဒုံးကျဉ်စနစ်မှာ ချို့ယွင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ ပြောခဲ့တာဟာ အမေရိကန် ဂျပန်စတဲ့ ရန်ဖက် နိုင်ငံတွေကို လှည့်ဖျားနိုင်ဖို့ နှစ်သိမ့် အယုံသွင်းထား ခဲ့တာမျိုးဖြစ်ကြာင်း အမေရိကန် စစ်တပ်နဲ့ စီအိုင်အေတို့က သုံးသပ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက်တုန်းကဆိုရင် အမေရိကန်နဲ့ ဂျပန် စစ်သင်္ဘောတွေဟာ ပုံမှန်အတိုင်း သမုဒ္ဒရာ မြေ လေ ပိုင်နက်တွေကို အပြည့်အ၀ကာကွယ်ဖို့ တာဝေးထိန်း ဒုံးစနစ်တွေနဲ့ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေ ကင်းလှည့် တာတွေ လုပ်ခဲ့ ပေမယ့် တကယ်တမ်း မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်လိုက် ချိန်မှာတော့ အငိုက်မိသွားခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တာဝန်ရှိ သူတွေက ပြောပါတယ်။
at 12/28/2012 04:55:00 PM 1 comment:
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ၏ မြန်မာ့ အားကစားကဏ္ဍ အကူအညီ ပေးရေး အစီအစဉ် အဖြစ် မြန်မာ အားကစားသမား ၁၇၀ ကို ခေါ်ယူ လေ့ကျင့် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ် သံရုံးမှ သံရုံး အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ တရုတ် နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသို့ အားကစား နည်းပြများ စေလွှတ်ရန်၊ မြန်မာ ကစား သမားများ အတွက် လေ့ကျင့်ရေး ကိရိယာ များနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင် ပစ္စည်းများ အထောက်အပံ့ ပေးရန်၊ အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ၏ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်များ ရေးဆွဲ ရာတွင် အကူအညီ ပေးရန်နှင့် ဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပရေးတို့ တွင် အကူအညီ ပေးရေး အစီအစဉ် များလည်း ပါဝင်ကြောင်း ၎င်း၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
at 12/28/2012 04:52:00 PM No comments:
ကြည်းတပ် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး အလောင်း လှိုင်မြစ်ရေပြင်တွင်ပေါ်လာ
ကြည်းတပ် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး အလောင်း လှိုင်မြစ်ရေပြင်တွင်ပေါ်လာ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် လှိုင်မြစ်ရေပြင်၌ တပ်မတော် ဗိုလ်ကြီး တစ်ဦး၏ အလောင်းအား ယခုလ ၂၀ရက် က တွေ့ရှိခဲ့ ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။ သေဆုံးသူ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး သည်ယခုလ၁၄ရက်က ၄င်းတည်းခိုသည့်ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းမှ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ အား ရွှေပြည်သာ တံတားသို့ ငှားရမ်းခဲ့ပြီး တံတားသို့အရောက်တွင် ကယ်ရီသမားအား ကွမ်းယာဝယ်ခိုင်းကာ ၄င်းသည် ရွှေပြည်သာတံတားပေါ် မှ ခုန်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
at 12/28/2012 04:50:00 PM No comments:
CDMA ဖုန်းတွေကို Internet Setting ချိန်နည်းလေးပေါ့ဗျာ......
ကျွန်တော်လည်း သူများဆီကနေ သိလာတာပါ......
Menu Key နှိပ်ပြီး Setting ထဲ ၀င်ပါ။
Wireless Network ထဲဝင်ပါ။
at 12/28/2012 09:44:00 AM No comments:
ဟဲဟိုးတွင် အဲပုဂံ လေယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လေယာဉ်မယ် မမို့မို့ကျော်စွာနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အဲပုဂံ လေကြောင်း လိုင်းမှ ခရီးစဉ် အမှတ် W9-011 လေယာဉ် အမှတ် XY-AGC လေယာဉ် အမျိုးအစား F-100 ဖြင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး-ဟဲဟိုး ခရီးစဉ် ပျံသန်း လာသော လေယာဉ်သည် ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ၂၅ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၅၁ မိနစ်ခန့်က ဟဲဟိုး လေဆိပ်သို့ အဆင်းတွင် လေယာဉ် မတော်တဆမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် အဆိုပါ လေယာဉ်နှင့် အတူ လိုက်ပါ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ အဲပုဂံမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်သူ မမို့မို့ကျော်စွာ အကြီးတန်း လေယာဉ်မယ်နှင့် မြဝတီ သတင်းစာ အဖွဲ့က သွားရောက်
တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ သည်များ ကို ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး။ အဲဒီနေ့က ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတာလေးကို ပြန်ပြော ပေးပါဦး။
at 12/28/2012 09:39:00 AM No comments:
အစ္စရေး နိုင်ငံက နေတိုး အဖွဲ့နှင့် စစ်ဘက် မဟုတ်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအား တူရကီ ထောက်ခံ
တူရကီ နိုင်ငံက ဒေသဆိုင်ရာ မဟာမိတ် အစ္စရေး နိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်နေသောကြောင့် အစော ပိုင်းက ချမှတ်ခဲ့သည့် ၎င်းတို့၏ ကန့်ကွက် ချက်ကို ရုပ်သိမ်းကာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် နေတိုးအဖွဲ့၏ စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ မဟုတ်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု များတွင် အစ္စရေး နိုင်ငံ ပါဝင် ဆောင် ရွက်ရေးကို ထောက်ခံ ချက် ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
at 12/28/2012 09:31:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ဈေးကွက်တွင် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှုကြောင့် နာမည်ရရှိပြီးဖြစ်နေသည့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ Hitachi ကုမ္ပဏီက ရန်ကုန်ရုံးခွဲတခု ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအတွက် Hitachi Plant Technologies Ltd ဥက္ကဋ္ဌ Mr.Masa haru sumikawa နှင့် အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်နှင့် အဖွဲ့အား ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်က တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
at 12/28/2012 09:29:00 AM No comments:
ဝယ်လိုအား ရှိနေသဖြင့် ရန်ကုန် ဒေါ်လာ ဈေးကွက်အတွင်း ဈေး ပြန်လည် မြှင့်တက်လာကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။ “ငွေကြေး လဲလှယ်ခွင့်ရ စင်တာတွေမှာ ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်ရဲ့ ၁၇ ရက်နေ့က ၁ ဒေါ်လာကို ဝယ်ဈေး ၈၄၇ ကျပ်၊ ရောင်းဈေး ၈၅၄ ကျပ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှာ ၁ ဒေါ်လာကို ဝယ်ဈေး ၈၅၂၊ ရောင်းဈေး ၈၅၈ ကျပ်အထိ မြှင့်လာတာ တွေ့ရတယ်” ဟု ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် ဦးရဲနိုင်ဝင်း က ဆိုသည်။
at 12/28/2012 09:27:00 AM No comments:
လေယာဉ်ပျံတစ်စင်းရဲ့ မှတ်တမ်းတင် ကိရိယာ Black-box Written by ကိုအောင်ချမ်းမြေ့ black-box ဆိုတာ ဘာလဲ?
လေယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုများ ဒါမှမဟုတ် လေယာဉ်ပျက်ကျမှုများမှာ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖုို့အတွက် black-box ကိုသုံးပါတယ်… black-box မှာ အဓိက အစိတ်အပိုင်းနှစ်မျိုးပါပါတယ်… ပထမ တစ်ခုကတော့ Flight Data Recorder (FDR)လို့ခေါ်တဲ့ ပျံသန်းမှု အချက်အလက်များကိုမှတ်သားပေးနိုင်တဲ့recorder ပါ… နောက်တစ်ခုကတော့Cockpit Voice Recorder (CVR) လို့ခေါ်ပါတယ်…ဒါကတော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့လေယာဉ်မှုးနဲ့တကွအခြား အမှုထမ်းများရဲ့ စကားပြော ဆက်သွယ်မှုများကို မှတ်သားပေးတဲ့recorderပေါ့… Black-box = FDR + CVR
at 12/28/2012 09:25:00 AM No comments:
အာဖဂန် ရဲတပ်ဖွဲ့ တာလီဘန် စစ်သွေးကြွ ၂၄ ဦးခန့်အား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့
အာဖဂန် ရဲတပ်ဖွဲ့များ အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း တာလီဘန် စစ်သွေးကြွ ၂၄ ဦးခန့် အား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် သော ကြေညာချက် တစ်စောင်၌ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
at 12/28/2012 09:22:00 AM No comments:
အမျိုးသမီးများ အတွက် စစ်မှုထမ်းဆောင်မည့် ဥပဒေ မူကြမ်းသစ် တစ်ရပ် အား ရုရှားပါလီမန် အောက် လွှတ်တော်သို့ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော် ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် တင်သွင်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရုရှား လွှတ်တော် အမတ် Tatyana Moskalkova က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
at 12/28/2012 09:21:00 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးများနှင့် လူထုအကြား စကား အခြေအတင်ဖြစ်ပွား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပညာရေးကွန်ရက် (၂)နှစ်ပြည့် ရန်ပုံငွေ ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်၌ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရပြီး ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းပြောကြား အပြီးတွင် တာဝန်ကျလုံ ခြုံရေးများနှင့် လာရောက်နားထောင်သော လူထုတို့အကြား စကားအခြေအတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
at 12/28/2012 09:20:00 AM No comments:
အိန္ဒိယတွင် Samsung Galaxy ပစ္စည်းပေါင်း အလုံး ၁၀ သန်းကျော် ရောင်းချပြီး
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လက စလို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ Samsung Galaxy S ကို စဖြန့် ပါတယ်။ ယင်းနောက် Galaxy ကုန်ပစ္စည်းများ ဆက် တိုက် ရောက်ပြီး ရောင်းအား အရှိန်အဟုန်နဲ့ တက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တမ်းအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ပထမ ၆လ အတွင်း အိန္ဒိယမှာ စမတ်ဖုန်း စုစုပေါင်း အလုံးရေ သန်း ၁၀၂.၄၃ သန်း မက ရောင်းချပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းထဲမှာ Samsung ရဲ့  ဖုန်း ၅.၅ သန်း ပါရှိပြီး ဈေးကွက်ရဲ့  ၄၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုကီယာတောင် ၁၉.၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပြီး Blackberry ထုတ်တဲ့ RIM က ၁၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
at 12/28/2012 09:18:00 AM No comments:
မြ၀တီမြို့တွင်DKBAမည်နှင့်တံဆိပ်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်သူများ ရှိနေကြောင်းစုံစမ်းသိ ရှိရသည်။ “DKBA၀တ်စုံဝတ်ထားပြီး DKBA မဟုတ်သူတွေလည်းရှိ ပါတယ်။ DKBA ၀တ်စုံဝတ်ရင် Without (လိုင်စင်မဲ့)ကားတွေစီး လို့ရတယ်။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေ လည်း စည်းကမ်းမဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်။ ဒါကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေသူတွေ ရှိတယ်။အဲလို အခက်ခဲလေးတွေ ကို ကျွန်တော်တို့လည်း ဖြေရှင်း ဖို့လုပ်နေပါတယ်””ဟု မြ၀တီဆက်ဆံရေးရုံးDKBAမှဗိုလ်မှူးဦးစန်းမြင့်က ယခုလ ၂၁ရက်တွင် ပြောကြား သည်။ DKBA စစ်ဝတ်စုံနှင့် ဘတ်ခ်ျ တံဆိပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့တွင် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ခြင်းက ယခုလိုပြဿနာများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ထပ်မံပြောပြသည်။
at 12/28/2012 09:16:00 AM No comments:
မကြာခင် ပြည်တွင်းခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစင်းပျက်ကျခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပေါ် အများကြီး ထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်လို့ မထင်တဲ့အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေး
ကော်မတီဥက္ကဌက ပြောလိုက်ပါတယ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်တဲ့ နိုင်ငံခြား ခရီးသည်ပေါင်း ၆ သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားချိန်မှာ ဒီအရေအတွက် ကျ မသွားဖို့ လေကြောင်း
လိုင်းတွေအပါအဝင် ခရီသွားလုပ်ငန်းမှာ ဘာတွေလုပ်ပြဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ စုံစမ်းထားတဲ့ ဘန်ကောက်ရုံးက မစုမြတ်မွန် တင်ပြပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွေ အပါအဝင် နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေ ဝင်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြား ခရီးသည်အရေအတွက်ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ၆ သိန်းလောက်ဖြစ်မယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လောလောဆယ် ရရှိထားတဲ့ အရေးအတွက်က ၅ သိန်း နီးပါး ရှိတယ် လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးကော်မတီဥက္ကဌ ကိုဖြိုးဝေရာဇာက ပြောပါတယ်။
at 12/28/2012 09:00:00 AM No comments:
မလေးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းမှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းတဲ့အတွက် ရေလွှမ်းပြီး လူပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရပြီး ၁၄၀၀၀ အရေးပေါ်စခန်းတွေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မိုးရေကိုမထ်ိမ်းနိုင်ဘဲ တရင်ဂါနူေ၇လှောင်တမန်ရဲ့ တံခါးကို ဖောက်ချလိုက်ရတဲ့အတွက်ရေပိုလျှံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိုးက လာမဲ့ မတ်လလောက်အထိရွာသွန်းနေအုန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
at 12/28/2012 08:45:00 AM No comments:
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပညာရေးကွန်ရက် ၂ နှစ်ပြည့် အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းများ ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးဂီတပွဲတော် အခမ်းအနားတွင် တက်ရောက်သူအချို့စည်းကမ်းမရှိသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဝေဖန်ပြောကြား
ယနေ့ (၂၇-၁၂-၂၀၁၂) ရက်နေ့ နေ့လယ်တစ်နာရီတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှကျင်းပသည့် ပညာရေးကွန်ရက်ရံပုံငွေပွဲတော်အား ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောကြားစဉ်တွင် တက်ရောက်လာသော ပရိသတ်များမှ စည်းကမ်းမရှိမှုကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဝေဖန်ပြောကြားသွားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်အတွင်း ပွဲသို့တက်ရောက်လာသော ပရိသတ်များမှ စည်းကမ်းမရှိဘဲ အားပေးမှုကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန့်ခွန်းပြောကြားနေရာမှ ပထမအကြိမ် သတိပေးပြောကြား ခဲ့သည်။
at 12/27/2012 11:44:00 PM No comments:
ရှန်ဟိုင်းရှိ ရှော့ပင်းစင်တာ အလှမွေးငါးကန် ရုတ်တရက်ပေါက်ထွက်မှု
တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ ရှော့ပင်းစင်တာတစ်ခုရှိ အလှမွေးငါးကန်ကြီး ရုတ်တရက် ပေါက်ထွက်သွားမှုကြောင့် လူ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အလှမွေးငါးကန်မှာ အရှည် ၇ မီတာ၊ အမြင့် ၃ မီတာရှိပြီး လီမွန်ငါးမန်း (Lemon Shark) ၃ ကောင်၊ အခြား သေးငယ်သည့် ငါး အများအပြားနှင့် လိပ်များကို ထည့်သွင်းမွေးမြူ ပြသ ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ငါးကန်အတွင်း ၃၃ တန် ပမာဏရှိ ရေများရှိနေပြီး ရုတ်တရက်ပေါက်ထွက်သွားသည့်အခါ ဖန်ကွဲစများ လွင့်စင်ထွက်လာခဲ့သည်။ အလှမွေးငါးကန် ပေါက်ထွက်သွားသည့် အချိန်တွင် ငါးများကို ကြည့်ရှုနေသူ အချို့ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
at 12/27/2012 11:29:00 PM No comments:
၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီ လဆန်းတွင်ဂျီအက်စ်အမ် ဆင်းကဒ်တွေကို ကျပ် ၁ သိန်း၊ (WCDMA) ဆင်းကဒ်တွေကို ကျပ် ၁ သိန်း ၂ သောင်းနဲ့ ရောင်းချမည်
လာမယ့် ဇန်န၀ါရီ လဆန်းက စပြီး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဟာ ဂျီအက်စ်အမ် ဆင်းကဒ်တွေကို ကျပ် ၁ သိန်း၊ 3G ဂျီအက်စ်အမ် (WCDMA) ဆင်းကဒ်တွေကို ကျပ် ၁ သိန်း ၂ သောင်းနဲ့ ရောင်းချမယ်လို့ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဌာန အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဌေးဝင်းက ဒီဗွီဘီကို အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
at 12/27/2012 10:57:00 PM No comments:
လာမည့်နှစ်တွင် လူနေရပ်ကွက်များ လျှပ်စစ်မီးလုံးဝ ပြတ်တောက်မည်မဟုတ်ဟုဆို
လူနေရပ်ကွက်များ လျှပ်စစ်မီးလုံး ၀ပြတ်တောက်မည်မဟုတ်တော့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ခိုင်က ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“၂၀၁၂ နွေရာသီမှာ သောင်းကျန်းသူများကြောင့် လျှပ်စစ်မီးမရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ် ခဲ့တော့ ပြည်သူတွေကို အပြည့် အ၀ပေးနိုင်ဖို့ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း တွေကို ဖြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်။ လာမယ့်နှစ်မှာ ရန်ကုန်မှာတော့ မီးအပြည့်အ၀ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ကျန်ဒေသတွေမှာတော့ အနည်း ငယ်ပြတ်တာတွေရှိမယ်”ဟု ဦးအောင်ခိုင်ကပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ် အားရရှိမှု တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာသဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၈၅၀ မဂ္ဂါဝပ်အထိ တိုးတက်ဖြန့်ဝေပေး နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားလိုအပ်မှုရှိလာပါက စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအားမီးဖြတ်တောက်မှု ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောသည်။
at 12/27/2012 10:51:00 PM No comments:
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Benedict XVI စီးဖို့အဖြစ်တွက် ကားကို မာစီဒီးက တာဝန်ယူ ထုတ်လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပုံမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ အတိုင်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးဖြစ်ရာ မကြာမီ ထုတ်လုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတတွေစီးတဲ့ကားပဲ ဈေးကြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး စီးတဲ့ကားလည်း အထိုက်အလျောက်
ဈေးကြီးပါတယ်။ ခန့်မှန်း တွက်ချက်ထားမှုအရဗြိတိန်ပေါင် ၃သိန်းခွဲဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆီလျော်မယ့်ကား ဖြစ်ပြီး ဟိုင်းဘရစ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
at 12/27/2012 10:45:00 PM No comments:
ကေအိုင်အေမှ မိုးညှင်းဘူတာ၊ ရှမ်းသချိုင်္င်းအနီးတွင် မိုင်းခွဲ
မိုးညှင်မှ မန္တလေးသို့သွားသော မီးရထားလမ်းအား မိုးညှင်းဘူတာအထွက်နား ရှမ်းသချိင်္ုင်းအနီး မိုင်တိုင် ၆၃၂ နားတွင် ကေအိုင်အေမှ ၂၆ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီလောက်တွင် မိုင်းခွဲခဲ့ပါသည်။ မိုင်းကွဲမှုကြောင့် ရထားသံလမ်း ၃ပေလောက်ပျက်သွားပြီး ရထားဘီးချော်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မိုးညှင်းမြို့အတွင်း နေအိမ်များ တုန်ခါမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ရထားသံလမ်း ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု မဖြစ်ပေါ်မီ အချိန်က မန္တလေးသို့ ထွက်ခွာမည့် မန္တလာ ၅၈ အစုန်ရထားသည့် လမ်းချော်မှု ဖြစ်ပွားသဖြင့် မိုးညှင်းဘူတာတွင် ရပ်နားနေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
at 12/27/2012 10:40:00 PM No comments:
ယခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များ ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှု မြင့်တက်လာခဲ့ရာ ရန်ကုန်လေဆိပ် တစ်ခုတည်းမှ ခရီးသွားများ လာရောက်မှုသည် ငါးသိန်းဝန်းကျင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်လေဆိပ် မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပခရီးသွား ဧည့်သည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာများ ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ကမ္ဘာသုံး ဗီဇာကတ်များ သုံးစွဲခွင့်ပြုပေးခြင်း၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ ပေးခဲ့ခြင်းနှင့်
နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များ မျက်စိကျလာစေရန် ဆွဲဆောင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ခရီးသွားလာသူများ ယခင်နှစ်ကထက်မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ဦးတင်ထွန်းအောင်က ပြောကြားသည်။
at 12/27/2012 10:37:00 PM No comments:
နှစ်ပေါင်း(၁၅၅) နှစ်နီးပါးရှိ မန္တလေးနန်းမြို့ရိုး အနောက်ဘက် (အာဠ၀ီတံတား) ရှေးမူမပျက်ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစတင်
နှစ်ပေါင်း(၁၅၅) နှစ်နီးပါးရှိ မန္တလေးနန်းမြို့ရိုး အနောက်ဘက် ကျုံးရေပြင်ဖြတ်သော ကြေးမုံအ၀င် အထွက် ပေါက်တံတား (အာဠ၀ီတံတား) ရှေးမူမပျက်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဒီဇင်ဘာ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ အဆိုပါတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်း များ ကို ရှေးဟောင်း သုတေသန အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာန (မန္တလေး ဌာနခွဲ) မှတာဝန် ယူ ဆောင်ရွက် နေခြင်း ဖြစ်သည်။
at 12/27/2012 10:04:00 PM No comments:
နိုင်ငံရေး ခိုလှုံရန် လိမ်လည် ကြိုးစားမှုဖြင့် မြန်မာတချို့ တောင်ကိုရီးယား တွင် အဖမ်းခံရ
အတုအယောင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံရန် ကြိုးစားမှုဖြင့် တောင်ကိုရီယား တရားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဖမ်းဆီးလိုက်သော နိုင်ငံခြားသားများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့ ပါဝင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာနှင့် နီပေါနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြားသား ၂၁ ဦးကို တောင်ကိုရီယား တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက အတုအယောင် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံရန် ကြိုးစားမှုဖြင့် ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း တောင်ကိုရီယား အခြေစိုက် Chosun သတင်းတပုဒ်အရ သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသား အရေအတွက်၊ ၄င်းတို့၏ အမည်နာမ များကိုသိရှိရန် တောင်ကိုရီယားအခြေစိုက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)မှ ကိုနေထွန်းနိုင် က တရားရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိများထံ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့သော်လည်း ထိမ်းသိမ်းခံထားရသူများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် လူဦးရေနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသိပေးခြင်း မရှိကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
at 12/27/2012 10:01:00 PM No comments:
ထိုင်းနည်းပညာသုံး မီးသင်္ဂြိုဟ်စက် ရွှေတောင်မြို့တွင် တည်ဆောက်
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ရွှေတောင်မြို့တွင် ပရဟိတ နာရေးကူညီမှု အသင်းက ဦးဆောင်ပြီး ရွှေတောင်မြို့၏ ပထမဆုံး မီးသင်္ဂြိုဟ်စက် ကို ဒရယ်ချောင်း သုသာန်တွင် စက်ကိရိယာ မသုံးဘဲ ထိုင်း နည်းပညာ သုံးကာ ဆောက်လုပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ယူ ဆောက်လုပ်သူ ဦးလှကြိုင် က ပြောကြားသည်။ နည်းပညာကို မြိတ်မြို့မှ ဦးဘိုနီက လှူဒါန်း ခဲ့ပြီး ၄င်း မီးသဂြိင်္ုလ်စက်တွင်လောင်စာ အနေနှင့် ထင်းကို အသုံး ပြုရကြောင်း လောင်ကျွမ်းချိန် တစ်နာရီ သာ လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
at 12/27/2012 03:54:00 PM No comments:
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ခရစ္စမတ် နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်း မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုနှင့် ဆီးနှင်းအများအပြား ကျရောက်မှုကြောင့် လူ ၆ ဦး သေဆုံးပြီး ဒေသခံ တစ်သိန်းကျော်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှု ကြုံတွေ့ရကြောင်း The Wall Street Journal သတင်းက ပြောကြားသည်။
မုန်တိုင်းနှင့် ဆီးနှင်းထူထပ်မှုကြောင့် ခရစ္စမတ်ကာလ ခရီးသွားသူများမှာ လေယာဉ်ခရီးစဉ် နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့ရသည်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဆောင်းတွင်းကာလ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူဝီစီးနီးယား၊ မစ္စစ္စပီနှင့် အလာဘာမားပြည်နယ်တို့တွင် အဆောက်အအုံ ပျက်စီးများရှိခဲ့သည်။ ထို့အတူ အီလီနွိုက်စ်ပြည်နယ်နှင့် အင်ဒီယာနာပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတို့တွင်လည်း ဆီးနှင်းများ အလွန်အမင်း ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရက်ပိုင်းအတွင်း ယာဉ်တိုက်မှုသုံးခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူများရှိခဲ့
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့နှင့် ၂၆ ရက်နေ့တို့တွင် ယာဉ်တိုက်မှု သုံးခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူများ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်များမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီအချိန်ခန့်က ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ကန်ဘဲ့လမ်း ထောင့်တွင် တိုယိုတာ ကဒီနားယာဉ်နှင့် တက္ကစီတစ်စီးတို့တိုက် မိခဲ့ရာ တက္ကစီယာဉ်မောင်းမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
at 12/27/2012 03:45:00 PM No comments:
ကဘူးလ်မြို့ရှိ ဒေသဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ ယူနီဖောင်း ဝတ်ဆင်ထားသော အာဖဂန် အမျိုးသမီး တစ်ဦးက အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအား ပစ်သတ် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု သံသယရှိသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
အမျိုးသမီးမှာ တာလီဘန် အဖွဲ့နှင့် အဆက်အသွယ် ရှိသူ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သံသယ ရှိကြောင်း အရာရှိ များက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် အမေရိကန် စစ်ဘက် အကြံပေး တစ်ဦး သေဆုံး ခဲ့ကြောင်းနှင့် အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နေတိုး အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က အတည်ပြု ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
at 12/27/2012 02:59:00 PM No comments:
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ ဒုံးပျံ လွှတ်တင်မှု အပေါ်တွင် ကုလသမဂ္ဂမှ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ် လျက်ရှိပြီး အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေး လိမ့်မည်ဟု ယူဆခြင်း
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီသည် မကြာသေးမီ ကာလ၌ ပြီးဆုံးခဲ့သည့်မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ ဒုံးပျံ ပစ်လွှတ်မှုအား အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် အလားအလာ မရှိကြောင်းနှင့် တရုတ် နိုင်ငံမှလည်း အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု များအား လိုလားလျက် မရှိကြောင်း တောင်ကိုရီးယား အရာရှိများမှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
at 12/27/2012 02:57:00 PM No comments:
at 12/27/2012 02:36:00 PM No comments:
at 12/27/2012 02:33:00 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် အတွက် သရုပ်ဆောင်၂၁ဦး ရွေးချယ်မည်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္တုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်မည့် ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင်၂၁ဦးကို ယခုလအတွင်း ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့၏ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုဇော်သက်ထွေးက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သည့် ဇာတ်ကောင် နေရာများ အတွက် လက်ရှိ ရုပ်ရှင်လောကမှ သရုပ်ဆောင်များ၊ ရုပ်ရှင် သင်တန်းများမှ သင်တန်းသားများ၊ သရုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင် စားသော နိုင်ငံသားများ အနက်မှ သင့်တော်သူ များကို ရွေးချယ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ရှင်းပြသည်။
at 12/27/2012 02:32:00 PM No comments:
ဧည့်လမ်းညွှန်များစာရင်းကို သတင်းစာတွင်မှားယွင်းဖော်ပြထားသည်ဟု ဧည့်လမ်းညွှန်အသင်းကပြောကြား
Air Bagan လေယာဉ် ပျက်ကျမှုတွင် လေယာဉ်ပေါ်တွင် ပါဝင်သော ဧည့်လမ်းညွှန် အရေအတွက်မှာ ၄ဦးဖြစ်ကြာင်းနှင့် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ၂ဦးဟု မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြထားကြောင်းနှင့်သေဆုံး သွားသော မနွယ်လင်းရှိန်အား ခရီးသည်ဟုဖော်ပြထားခြင်းကိုပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဧည့်လမ်းညွှန်များ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကန်တော်ကြီးပဲလေစ့် ဟိုတယ်တွင် Air Bagan မှ ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တက်ရောက် ပြောကြားသည်။
at 12/27/2012 02:27:00 PM No comments:
တရုတ် နိုင်ငံမှ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ကလေးမှောင်ခို ကွန်ရက် တစ်ခုကို တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းပြီးနောက် သံသယ ရှိသူ ၃၅၅ ဦးကို ဖမ်းဆီး၍ ကလေး ၈၉ ဦးကို ကယ်တင် နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ များက ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖူကျန့်၊ ယူနန်၊ စီချွမ်၊ အန်ဟွေးနှင့် ကွမ်တုံ အပါအဝင် ဒေသ ကိုးခုမှ ရဲအရာရှိ များသည် ကလေးမှောင်ခို ဂိုဏ်းကို ဖြိုခွင်းရန် အတွက် ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေး တစ်ခုကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် စတင်လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြ ကြောင်း ပြည်သူ့ လုံခြုံရေး ဝန်ကြီးဌာန လူမှောင်ခို ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေး ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချန်ရှီကူ က ပြောကြား ခဲ့သည်။
at 12/27/2012 02:24:00 PM No comments:
သီရိလင်္ကာတွင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ငွေလိမ်သူ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၀၀ ကျော် အဖမ်းခံရ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ငွေလိမ်ယူနေသော တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၀၀ ကျော်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သီရိလင်္ကာရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကပြောကြားခဲ့ သည်။ သီရိလင်္ကာ ဗီဇာကိုင်ထားသော ယင်းတရုတ်နိုင်ငံသားတို့သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာများ၏ အချက်အလက်များကို ခိုးယူကာ သီရိလင်္ကာရှိ ဘဏ်စာရင်းများထံ ငွေလွှဲပေးရန် လိမ်လည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးတန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
at 12/27/2012 02:23:00 PM No comments:
ပခုက္ကူမြို့တွင် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီခွဲများမှ ၀န်ထမ်းသစ်များ ခေါ်ယူမှု များပြားလာသော်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ ဘွဲ့ရလူငယ် အများအပြားရှိနေသေး
ပခုက္ကူမြို့တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီခွဲများ လာရောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ဘဏ်ခွဲများဖွင့်လှစ်မှု များပြားလာသည့်အတွက် ၀န်ထမ်းသစ်ခေါ်ယူမှုများကြောင့် ဒေသခံလူငယ်များကြား အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး မျှော်လင့်လာကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်ခွဲသစ်များမှ အလုပ်ခေါ်ယူမှုများအား မြို့ခံလူငယ်များသာမက အနီးနားရှိမြို့များမှ လူငယ်များပါ လာရောက်လျှောက်ထားကြသော်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ လူငယ်ဘွဲ့ရနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမှာ မျှတမှုရှိရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း သိရသည်။
at 12/27/2012 02:19:00 PM No comments: